Etu esi etinye Xfce na ArchLinux | Site na Linux
Etu esi etinye Xfce na ArchLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, Aplicaciones, Nkesa, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ana m echesi echiche ike ịnwale Archlinux con Xfce (atụla m ụjọ debianites) ịhụ ka o si eme. Ọ bụrụ na m nwere ike iwunye ya (taa) mgbe ahụ, m ga - eme nkuzi banyere otu esi ahazi ya site na nkwụsị.
Ma ọ bụrụ na ị bụworị onye ọrụ nke Arch, M na-ahapụrụ gị usoro iji wụnye Xfce na-enweghị ịnwụ ọnwụnwa:
1- Iji wụnye Xfce bụ isi, anyị ga-etinye na njikwa ahụ:
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ nrụnye n'ụzọ doro anya:
2- Iji wụnye plugins (ihe oma) de Xfce naanị ihe anyị na-eme bụ iwu a:
3- Ọ bụrụ na anyị chọrọ xfce4-igwekota soro ya rụọ ọrụ ALSA, anyị nwere iji wụnye nchịkọta ndị a:
4- N'ikpeazụ maka ihe Xfce na-arụ ọrụ nke ọma na anyị nwere iji wụnye Ụgbọ ala.
5- Gini maka Xfce ọ dị mma na anyị ga-etinyerị injinị Gtk:
Ọ bụrụ na anyị etinyeghị ihe ọ bụla Onye njikwa oge (Nbanye Manager) dị ka LigthDM ma ọ bụ ebughibu, anyị malitere Xfce na iwu:
Ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ anyị tinye ya na faịlụ ahụ ~ / .xinitrc.
Ruo ebe a ihe niile kwesiri ịbụ "nke nkịtị" .. More Ama ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Etu esi etinye Xfce na ArchLinux
Ihe 49 kwuru, hapụ nke gị
jjajajaa rue mgbe kz gaara eme ka gi kwenye distro. hahaha just kidding xD. Etinyere m ya ụbọchị ole na ole gara aga mana enweghị m ike ịmalite kde n'ihi na agbaghara m ịmalite daemon debus, mana m ghọtara mgbe m gụsịrị akwụkwọ ntuziaka na m bụ nzuzu LOL. Ma eleghị anya, na ngwụsị izu a, m ga-anwa ịwụnye obere nke ọma yana obere ọsọ ọsọ.
Hahaha ekwenyeghi m. Achọrọ m ịme ule ụfọdụ. Maka ndekọ ahụ, ọ bụrụ na anaghị m eji Arch (na m na-ekwukarị ya) ọ bụ n'ihi ọnọdụ njikọ yana na.
Aga m achọpụta nke ahụ ... ọ bụrụ na m tinye Arch repos na mpaghara mpaghara ma nwee ike ịnweta anyị n'ụzọ dị mfe, ị ga-eji Arch? hehe ...
Ikwesiri itinye dbus na daemons na rc.conf 😀
Echegbula, ọ bụghị na ị bụ onye nzuzu ... ị gụghị akwụkwọ nke ọma 🙂
Onweghị ihe, ị nwaa ọzọ gwa anyị.
Na eziokwu, ọ masịrị m dị ka ụnụ… Amaghị m ihe kpatara na ọ chọrọ ịwụnye Arch HAHAHAHA
Ọ bụrụ na, dịka m gwara gị na ngwụcha izu a, m ga-anwale ọzọ ebe ahụ, m ga-agwa gị.
Can nwere ike ịgwa anyị ihe ọ bụla, agbanyeghị na ekwenyekwara m na ọ bụ na ị tinyeghị dbus
Ego ole dị iche na arụmọrụ dị n'etiti iji Arch na Debian Testing, nke ikpeazụ sitere na obere ntinye. O doro anya na ị na-eji, otu ma ọ bụ obere, otu desktọọpụ na ngwa?
N'ihe banyere ndị njikwa, echere m na Pacman na-arụ ọrụ nke ọma karịa Apt, dịka ọmụmaatụ
Ebe gbara ọchịchịrị nke ike dị ike karị!
Ọ bụ ihe m na-achọ ịchọpụta 😀
Elva, ana m asị Elav zere pacman ka ị nwere ike, otu oge ịnwale ya ị gaghị achọ ịhapụ ya 😀
Ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ anyị tinye ya na faịlụ ~ / .xinitrc.
ọ bụrụ na [-d ​​/etc/X11/xinit/xinitrc.d]; mgbe ahụ
maka f na /etc/X11/xinit/xinitrc.d/*; mee
[-x "$ f"] & &. "$ F"
exec ck-igba egbe-oge startxfce4
Elva, ana m ekwu elav, ị nwere ike ịzọ ụkwụ nzọụkwụ a, ka anyị kwuo ihe atụ na ị ga-eji Gdm:
Anyị na-emezi buut
Anyị na-ahapụ usoro ndị a:
Ma nke a dị ka nke ahụ
Anyị gbakwunye gdm na dbus daemons
Egwu Xinitrc nwere ike imebi okwu nke ~, ọtụtụ oge ọ naghị apụta maọbụ ọ bụrụ na ọ pụta na faịlụ ahụ tọgbọ chakoo
Couñaje, m na-ekwu, Obi ike, daalụ maka ekele gị .. Otu ajụjụ Gịnị ma ọ bụrụ na anyị ejiri LightDM?
Amaghị m LightDM, mana lee Wiki ahụ
Gba chaa chaa M ga-asị na ọ bụ ịgbakwunye otu akara na akụkụ nke
Obi ike adighi mkpa itinye gdm na daemon's
ndị mmụọ ọjọọ m (syslog-ng dbus networkmanager netfs crond)
Fuck ndị gbara gị gburugburu ga-abụ akwa gị, na-akatọ HAHAHAHA mgbe niile
Ọ katọghị, ọ mere ka o doo anya na ọ dịghị mkpa itinye gdm na daemons, naanị edezi / wdg / inittab ezuola. Nwere ike ghara ịlụ ọgụ na m esoghị gị.
Ekwula m okwu ka iwe mebie uche m ole na ole buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Achọrọ m ịkọ, ọ dịghị ihe ọzọ
Kpọmkwem, ọ dịghị GDM / KDM dị mkpa na daemons ... naanị na-ahazi inittab nke ọma, ọ dịghị ihe ọzọ 😉
Ma ọ bụghị na ọ dị mfe (ma ọ dịkarịa ala maka onye mbido) iji rc.conf, tinye lightdm ma ọ bụ ebe ahụ, ma buo xfce4 n'ụzọ ahụ? Ọ bụrụ na ị jiri ebughibu ị ga-ahazi .xinitrc nke bụ ihe ọ ga-agụ mgbe ị na-agba. Dabere na wiki (n'oge m Arch, m hazie ya otu a ma rụọ ọrụ zuru oke) iji zere njehie ị nwere ike ịgbanwe nhazi ahụ site na itinye nbanye_cmd exec ck-launch-session / bin / bash -login ~ / .xinitrc% session
na slim.conf na idebe xinitrc dị mfe dịka o kwere mee. Amaghị m ma ọ bụrụ na lightdm dịrịrị na nkwụghachi, echere m na ọ dị mfe karịa n'ihi na ị gaghị eji xinitrc (amaghị m nke a)
N'ọnọdụ ọ bụla, ihe niile dị na wiki! Na ikpori ndụ xfce na Arch, maka uto m otu n'ime ngwakọta kachasị mma dị. Na-echezọ iji xfwm-tiliing nke na-arụ ọrụ dị ukwuu!
PS dbus kwesịrị ịga n'ihu gdm na rc.conf, echere m.
Enwerem ya dika m siri tinye ya ma na-aga nke oma
Ma ọ bụghị na ọ dị mfe (ma ọ dịkarịa ala maka onye mbido) iji rc.conf, tinye lightdm ma ọ bụ ebe ahụ, ma buo xfce4 n'ụzọ ahụ?
O zughi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ kwụnye na akpaghị aka
Kedu ka m ga-esi nweta ntuziaka ntinye eserese Archlinux? Otu onye nye m eriri.
Zaghachi <° Linux
Ntuziaka a abughi oge, na gnome 3 enwere ọtụtụ daemons alsa hal fam gdm na dbus na modulu fuse na-efu.
Ma enwere m obi ike, ị kwesịrị iji ihe osise na ihe niile wụnye kde, onye aja si xfce ma ọ bụ elav na m si gnome a
Ọ bụghị echiche ọjọọ, anyị kwesịrị ikwu banyere ya site na mail ma ọ bụ ihe ya na ya ma ọ bụrụ na ha hapụ m ka m bipụta ya, m ga-ebipụta ya ozugbo
nwa oge gara aga enwere m ntuziaka nwụnye site na 0, mana foto nke ọ bụla. M na-eme dị ka aja, M malitere echepụta na grub2 na-enweghị na-agụ nke ọma na na akụrụngwa m, eh, kwado m na nke kacha mma ugbu a mebere igwe na m na-amalite na-eduzi a izu ụka a.
VirtualBox, ọ dịghị ihe ka mma 🙂
Enwere m naanị Virtualbox.
Mgbe inwere ya, mee ka onye aja sandy mara ma gwa ya
onye isi obodo dijo
Ekele, amaara m na okwu a ochie, mana m debere arch na mgbe ijikọ ụfọdụ eriri ọ na-amata ya mana anaghị ekwe ka m hụ ya na-ekwu na ọ gaghị arịgo Enweghị ikike ịrụ ọrụ. Otu ihe a na-aga maka cdrom. Ihe m nwere ike ime. Enwere m nchekwa na wiilị na onye ọrụ m yana ihe niile. Lee ma ị ga-enyere m aka.
Zaghachi ka edil
Gbalịa itinye ya na adm na otu diski ahụ.
Nah Adịghị m mma maka ịme ntuziaka zuru ezu HAHAHAHAHA
Bịanụ, ọ bụghị nnukwu nsogbu, jiri dị ka onye ndu iji mee ndu m nkọwa zuru ezu na ArchBang site na uL
Obi ike, enwere m mmasị nke ukwuu, achọrọ m, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, mee ka m doo anya n'ihi na KZKG ^ Gaara ị na-akpọ gritty.
Hahahaha onye ozo nke ahubeghi Naruto. Onweghi ihe mere, aga m akọwa. E nwere a Manga usoro a na-akpọ Naruto ebe otu onye nke na-agụ akụkọ bụ onye ndú nke Obodo Nta, ma aha ya bụ Kazekage Gaara. Ezigbo enyi anyị nwere nick: KZKGGaara, ọ bụ ezie na n'ezie ọ kwesịrị ịbụ KCKGGaara, mana agbanyeghị.
Njehie ... ọ gaghị abụ KCKG n'ihi na ọ bụghị maka ịkpọ okwu, ọ bụ maka ndị na-ekwenye ekwenye, ị hụrụ C ọ bụla na KaZeKaGe? 😉
Egbula ịnabata ya, ị rịọrọ maka ya, naanị ị ga-anagide ya, hahahahahaha.
HAHAHAHAHA hey by the way, m nwere (anyi nwere n'ezie) ntinye, oburu na ichoro inye anyi aka na saịtị a, kwere m, i gha enyere anyi aka
Dee m email 😉
Eh nwebisiinka nke aja nwere aha m 😀
Nke ahụ ziri ezi, m gaara ajụ gị, ọ bụghị m
Ọ dị mma maka ịwụnye Arch.
I nwekwara ike nwalee Lxde. Mkpa ọkụ, mara mma.
Ozugbo ị banyere na Arch ụwa, ị gaghị apụ apụ.
Abatala m n'ime .. Ka anyị hụ ogologo oge ọ ga-adịgide m 😀
Na na iji Chrome, ọ na-abata na ebe nchekwa Arch?
N'ime ndị ọrụ a Chromium, na AUR ị nwere ọtụtụ dịgasị iche iche iji wụnye Chrome
Enweela m ọtụtụ foto nke isi ntọala 😀 ihe na-atọ ọchị ha na-ekwu bụ nke kachasị sie ike, mana ama m ama ya site na obi 😀 wee wụnye gnome 3 yana m ga-etinye ederede 😀 na nkọwa ahụ. Eh, kedu ka ị si eme akụkụ gị?
Obi ike nọrọ na kde
aja ma ọ bụ elva ga-eme ndu xfce. (nke a bụ echiche m ma ha akwadoghị)
Ọfọn, ozugbo ịmara otu esi arụ ọrụ na onye nrụnye ihe niile dị mfe, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya .. Ahh na Elva na-ekwu na ọ nweghị nkuzi Xfce ọ bụla maka gị.
Elav ga-eme ya (ma ọ bụ mee ya, edoghị m anya), mana… me Xfce? HAHA enweghị egwuregwu HAHA.
ndewo mmadụ nwere ike inye m aka, m na-achọ ịwụnye na igwe arụmọrụ + xfce na njikwa gdm etinyela m ngwugwu xorg meta, wụnye gdm, tinye dbus daemon (na njedebe nke ihe niile na ndepụta ahụ) wụnye xfce na xfce-goodies mana Mgbe m bidoro igwe ihe niile na - ebido nke ọma mana mgbe m kwesịrị ịgba ọsọ ngalaba na - amalite njikwa m ga - enweta ihuenyo ojii na ọkwa dị egwu dịka ọ bụ bọl
PS: Abụ m onye mbido mana achọrọ m ịnwale ụta n'ihi mmasi
Ma bọtịnụ bọtịnụ anaghị arụ ọrụ m na XFCE ma ọ bụ LXDE ...
E wezụga ihe ahụkarị: "Achọghị m Linux, m ga-alaghachi na Windows"
Ubuntu 12.04 (Kpọmkwem Pangolin) nwere ike B fitGH fit dabara na CD